Devoly - Wikipedia
Ny Devoly, ao amin’ ny jodaisma sy kristianisma ary silamo, dia fanahy izay mifanohitra mandrakariva amin’ Andriamanitra sady mitaona ny olombelona hiala amin’ Andriamanitra. Amin’ ny fomba fijery teolojika, ny devoly dia heverina ho anjely nikomy tamin’Andriamanitra, izay potraka sy nazera tety an-tany, ka mitaona sy manosika ny olombelona hanao ny ratsy. Indraindray ny devoly dia heverina fa mahaleo tena. Nefa indraindray koa dia heverina fa Andriamanitra no mamela malalaka ny devoly hakafanahy ny olombelona ka hitaona azy amin’ny ratsy.
I Satana, nataon'i Gustave Dore, 1866
2 Araka ny jodaisma
2.1 Ao amin' ny Pentateoka
2.2 Araka ireo bokim-pahendrena
2.3 Araka ny bokin' ireo Mpaminany
2.4 Araka ireo boky ara-tantara
3 Araka ny kristianisma
3.1 Araka ireo evanjely kanônika
3.2 Araka ireo epistily kanônika
3.3 Araka ny Apôkalipsin' i Joany
3.4 Ireo heverina ho fiasan' ny devoly na ny devoly miseho vatana
4 Araka ny fivavahana silamo
Ny teny nogasina hoe devoly dia avy amin’ny teny anglisy hoe devil, izay avy amin’ny teny anglisy tranainy kokoa hoe devel, izay avy amin’ny teny anglisy tena tranainy hoe dēofol. Ity indray dia avy amin’ny teny latina hoe diabolus izay avy amin’ny teny grika hoe διάβολος / diabolos. Ity teny grika ity dia avy amin’ny matoanteny grika hoe διαβάλλω / diabállô, izay midika hoe "mampizara", "mampisaraka" na "manimba". Ny teny hoe diabolos izany dia midika hoe "mpampizara", "mpampisaraka", sns. Nenti-nandika ny teny hebreo hoe שָׂטָן / śāṭān, izay midika hoe "mpiampanga" na "mpifanadrina", io teny grika io.
Ny devoly dia mitsikilo ny ataon’ny olombelona mba hiampangany azy amin’Andriamanitra sady mba hisarahan’ny olombelona amin’Andriamanitra. Niitatra izany noho ny laingany ka sady fahavalon’ny olombelona ny devoly no fahavalon’Andriamanitra koa.
Ho an’ny sampana rabinika sasany, ny satana dia mifandray amin’ny "fitaoman’ny ratsy", dia ny Ratsy izay lasa persôna mahaleo tena. Izany fiheverana ny ratsy ho persôna izany dia mifandray amin’ny finoana jiosy izay mihevitra fa ny olombelona dia voabaikon’ny hery ratsy izay tsy miankina amin’ny sitrapony. Noho izany dia hita ao amin’ny jodaisma sy ny fivavahana hafa fa ny olona dia mety "hitoeran" ’ny devoly na ireo fanahy eo ambany fifehezany, dia reo demony (anjely ratsy). Ny devoly dia atao hoe menarana sy anjely potraka ary satana ao amin’ny Baiboly hebreo.
Ny menarana (hebreo: nahash) ao amin’ ny Genesisy no nampihinana an’i Adama sy Eva ny voankazo voarara ka ny taranaky ny vehivavy dia voalaza fa hanorotoro ny lohany ary izy handratra ny ombelahintongotry ny zanaky ny vehivavy (Gen. 3:14-15). Ny menarana eto dia tsy iza fa i Satana. Adikan'ny Kristiana ho i Jesoa na Jesosy izany taranaky ny vehivavy izany.
Araka ireo bokim-pahendrenaHanova
Voalaza ao amin’ ny Bokin’i Joba ny amin’ i Satana (Job. 1.8-11) izay navelan' Andriamanitra hampahory an'i Joba. Io boky io, sahala amin'ny Bokin' ny Genesisy, dia manohana fa i Satana fa tsy Andriamanitra no nahatonga ny ratsy.
Araka ny bokin' ireo MpaminanyHanova
Miresaka ny amin’ny anjely ratsy ny Bokin’i Isaia izay manamafy ny nahapotraka an'i Satana noho ny fitsiriritany hitovy amin’Andriamanitra (Isa. 14.12-15). Ny Bokin’i Ezekiela dia heverin'ny sasany fa miresaka ny amin’izany koa (Ezek. 28.13-16). Torak'izany ny Bokin'i Zakaria (Zak. 3.1-2).
Araka ireo boky ara-tantaraHanova
Miresaka ny amin’i Satana koa ny Boky voalohan'ny Tantara (1Tant. 21.1).
Amin'ny Kristiana, ny fisian’ny olona sasany itoeran’ny devoly dia famantarana ety ivelany ny fanjakan’ny devoly izay mihatra amin’ny olona rehetra. Niady amin’i Devoly i Jesoa hatrany amin’ny tany efitra (nakan’ny devoly fanahy azy) ka hatrany Kalvary. Ny Kristiana dia mino fa ny fanomboana an’iKristy teo amin’ny hazo fijaliana dia nahatonga ny Devoly sy ny mpiara-dia aminy (ny demony) ho resy tanteraka.
Ny fakam-panahy nahazo an'i Kristy, nataon'i Ary Scheffer, 1854
Ny tena fehin’ny finoana kristiana momba ny devoly dia izao: Ny fanjakan’ny devoly amin’ny olombelona dia azo antoka fa hifarana noho ny nahatongavan’i Jesoa Kristy tety an-tany.
Araka ireo evanjely kanônikaHanova
Ny resak’i Jesoa izay hita ao amin'ireo Filazantsara dia maneho ny fananan’ny olombelona safidy malalaka izay tokony hanaporofo ny fahadiovam-panahiny amin’ny fisafidianana ny hiala amin’ny fahotana hahatonga azy hanan-toerana any am-paradisa. Nefa misy hery roa izay misintona ny olombelona, dia ny nofo sy ny fanahy: ny nofo dia mitambatra amin’ny fakam-panahy sy ny fahotana ary ny devoly, fa ny fanahy kosa dia momba ny fahadiovam-po izay mitarika ho amin’ny famonjena. Ireo epistily kanonika dia manamafy izany (jereo Doalisma).
Ao amin’ny fivavahana kristiana, tahaka ny hita ao amin’ny fivavahana jiosy, ny tsara sy ny ratsy dia tsy mitovy hery. Ireo anjely potraka (demony) sy ny lehibeny (Devoly) dia miezaka mampiely ny ratsy amin’ny olombelona amin’ny alalan’ny fakam-panahy nefa ho resy izy ireo amin’ny farany. Zanaka ara-panahin'ny devoly ny olona izay tsy nanaraka ny tenin'i Jesoa (Jao. 8.42-44).
Araka ireo epistily kanônikaHanova
Amin’i Paoly, i Satana dia ilay fahavalon’ny olombelona, araka ny fahazoany ny hevitry ny Testamenta Taloha. Hita izany ao amin’ireo taratasy alefany (1Tes. 2.17-18.).
Araka ny Apôkalipsin' i JoanyHanova
Amin’ny fifanandrinana eo amin’ny tsara sy ny ratsy, araka ny Apôkalipsin'i Joany (Apôk. 12.7-8), ny devoly dia miseho amin’ny endrika biby mahatahotra (dragona). Ao koa ny amin’ny fanisan’ilay Bibidia, dia ny isa 666 (Apok. 13.18) izay heverina fa manondro ny devoly nefa misy ny mivaofy izany amin’ny fomba hafa.
Ireo heverina ho fiasan' ny devoly na ny devoly miseho vatanaHanova
Ny Kristiana dia mihevitra fa ny devoly dia miseho vatana amin’ny alalan’ny olona na fikambanana na fanjakana izay lazainy fa fahavalon’ny Fiangonana. Ny Fanjakana rômana, izay mpanejika voalohany ny kristianisma, dia noheverina fa tafik'ireo demony. Ny devoly dia heverina ho tompon’andraikitra tamin’ny fivakisan’ny Kristiana, dia ilay mpitarika ho amin’ny finoan-diso sy fampianaran-diso (herezia) sy ireo fanompoam-pivavahana momba izany. Ny Gnôstika sy ny Bôgômila ary ny Katara dia nampangaina ho nanao fivavahana satanika.
Araka ny fivavahana silamoHanova
Ny finoan’ny Silamo momba ny devoly na satana dia misy itovizany amin’ny finoan’ny Kristiana sy ny Jiosy. Resahina ao amin’ny Kor'any ny amin'ny atao hoe shaitana (arabo: shayṭān raha tokana fa shayāṭīn kosa raha maro). Atao hoe Iblisy (arabo: Iblis) ny mpitarika azy ireo. I Iblisy dia tsy anjely fa jiny (namboarina tamin’ny afo). I Iblisy dia jiny tsara niova ho ratsy. Izy ilay hany zavaboary nandà tsy hiankohoka eo anatrehan’i Adama.
Tany aloha, rehefa tsy nanao afa-tsy nampiely ny ratsy ireo jiny ety an-tany, dia nirahin’Andriamanitra i Iblisy (jiny tany an-danitra izay tena mpanoa an’Andriamanitra tamin’izay) sy ny mpanara-dia azy maro mba handringana ireo jiny ratsy ireo. Dia notanterahiny tokoa izany. Nefa tamin’ny nahavitan’Andriamanitra ny famoronana ny olombelona dia nasain’Andriamanitra i Iblisy mba hiankohoka eo anoloan’i Adama. Tsy nety niankohoka izy satria izy izay vita tamin’ny afo, hoy izy, dia tsara lavitra noho i Adama izay vita tamin’ny tany. Noho izany tsy fankatoavana an’Andriamanitra izany ka voaroaka avy any an-danitra i Iblisy sy ny namany.
Nozonin’Andriamanitra i Iblisy nefa navelany malalaka haka fanahy ny olona, toy ny nataony tao amin’ny zaridainan’i Edena rehefa avy noforonina i Eva (arabo: Hawwae). Ny ataon’i Iblisy amin’izao dia ny mamaly faty ny olombelona ka miezaka mitondra mandrakariva ny olona ho amin’ny fakam-panahy sady mitaona azy mba tsy hankato an’Andriamanitra tahaka azy.
↑ "14 Ary hoy Jehovah Andriamanitra tamin'ny menarana: Satria nanao izany ianao, koa amin'ny biby fiompy rehetra sy ny bibi-dia rehetra dia ianao no voaozona: ny kibonao no handehananao, ary vovo-tany no hohaninao amin'ny andro rehetra hiainanao. 15 Dia hampifandrafesiko ianao sy ny vehivavy ary ny taranakao sy ny taranany: izy hanorotoro ny lohanao, ary ianao kosa hanorotoro ny ombelahin-tongony." (Gen. 3:14-15 -- Ny Baiboly).
↑ "8 Dia hoy Jehovah tamin'i Satana: Efa nandinika an'i Joba mpanompoko va ianao? Fa tsy misy tahaka azy eny ambonin'ny tany, fa olona marina sy mahitsy izy sady matahotra an'Andriamanitra ka mifady ny ratsy. 9 Ary Satana dia namaly an'i Jehovah ka nanao hoe: Moa tsy fanantenan-javatra va no atahoran'i Joba an'Andriamanitra? 10 Tsy Hianao va no nanao fefy manodidina azy sy manodidina ny tranony ary manodidina izay ananany rehetra? Notahinao ny asan'ny tànany ka manenika ny tany ny omby aman'ondriny. 11 Fa ahinjiro ange ny tananao ka tendreo izay ananany rehetra raha tsy handà Anao eo imasonao aza* izy e!" (Job. 1.8-11 -- Ny Baiboly)
↑ "12 Endrey! latsaka avy tany an-danitra ianao, ry ilay fitarik'andro, zanaky ny maraina; Voakapa hianjera amin'ny tany ianao, ry ilay mpandripaka firenena. 13 Ary ianao efa nanao anakampo hoe: Any an-danitra no hiakarako, ary ambonin'ny kintan'Andriamanitra no hanandratako ny seza fiandrianako; Dia hipetraka eo an-tendrombohitra; fivoriana any am-parany avaratra aho; 14 Hiakatra ho any ambonin'ny havoan'ny rahona aho ka ho tahaka ny Avo Indrindra; 15 Kanjo hampidinina hatrany amin'ny fiainan-tsi-hita ho any ampara-vodilavaka ianao." (Isa. 14, 12-15 -- Ny Baiboly)
↑ "13 Tany Edena, sahan'Andriamanitra, ianao; Ny vato soa rehetra ny eloelo teo amboninao, dia ny karneola, ny topaza, ny onyksa, ny krysolita, ny beryla, ny jaspy, ny safira, ny robina, ny emeralda ary ny volamena; Ny fampanenoana ny ampongatapakao sy ny sodinao dia tao aminao, tamin'ny andro namoronana anao dia natao koa ireo. 14 Hianao dia kerobima voahosotra izay manaloka, fa voatendriko ianao; Tao an-tendrombohitra masin'Andriamanitra ianao; Tao amin'ny vato mirehitra no nitsangantsangananao. 15 Tsy nanan-tsiny ianao tamin'ny nalehanao hatramin'ny andro namoronana anao ka mandra-pahita heloka tao aminao. 16 Noho ny habetsahan'ny varotra nataonao dia nofenoina loza tao aminao, ka nanota ianao; Ary dia nolotoiko ka nariako niala tamin'ny tendrombohitr'Andriamanitra ianao, Ary nosimbako ianao, ry kerobima manaloka, hiala tao amin'ny vato mirehitra." (Ezek. 28.13-16 --Ny Baiboly)
↑ "1 Ary dia nasehony ahy fa, indro, Josoa mpisoronabe nitsangana teo anatrehan'Ilay Anjelin'i Jehovah, ary Satana nitsangana teo an-kavanany hiampanga azy. 2 Ary hoy Jehovah tamin'i Satana: Hananatra anao anie Jehovah, ry Satana; eny, Jehovah Izay nifidy an'i Jerosalema anie hananatra anao; tsy forohana nosarihana tamin'ny afo va ity?" (Zak. 3.1-2)
↑ "Ary Satana nitsangana hampidi-doza tamin'ny Isiraely ka nanome saina an'i Davida hanisa ny Isiraely." (1Tant. 21.1 -- Ny Baiboly)
↑ "42 Hoy Jesosy taminy: Raha Andriamanitra no Rainareo, dia ho tia Ahy ianareo, satria avy tamin'Andriamanitra no nivoahako sy nankanesako atỳ ; fa Izaho tsy tonga ho Ahy, fa Izy no naniraka Ahy. 43 Nahoana no tsy azonareo ny teniko? satria tsy mahay mihaino ny teniko ianareo. 44 Hianareo avy tamin'ny devoly rainareo, ka izay sitraky ny rainareo no tianareo hatao. Izy dia mpamono olona hatramin'ny taloha, ary tsy nitoetra tamin'ny marina, satria tsy misy marina aminy. Raha mandainga izy, dia ny azy no lazainy, satria mpandainga izy sady rain'ny lainga." (Jao. 8.42-44 -- Ny Baiboly)
↑ "17 Ary izahay, ry rahalahy, rehefa tafasaraka taminareo vetivety foana tamin'ny fanatrehana, fa tsy tamin'ny fo, dia vao mainka nitady sy naniry fatratra hahita ny tavanareo. 18 Koa naniry hankany aminareo indray mandeha amana indroa izahay, dia izaho Paoly; nefa nosakanan'i Satana izahay." (1Tes. 2.17-18. -- Ny Baiboly)
↑ "7 Ary nisy ady tany an-danitra: Mikaela sy ny anjeliny niady tamin'ilay dragona; ary ilay dragona mbamin'ny anjeliny kosa dia niady, 8 nefa tsy naharesy, sady tsy nisy fitoerana ho azy intsony tany an-danitra." (Apok. 12.7-8 -- Ny Baiboly)
↑ "Indro ny fahendrena. Aoka izay manan-tsaina hanisa ny isan'ny bibi-dia, fa fanisan'olona izany; ary enina amby enim-polo amby enin-jato no isany." (Apok. 13.18 -- Ny Baiboly)
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Devoly&oldid=1042957"
Dernière modification le 12 Janoary 2022, à 13:07
Voaova farany tamin'ny 12 Janoary 2022 amin'ny 13:07 ity pejy ity.